Oké Osimiri Arctic glacial: njirimara, ihu igwe, anụmanụ na ihe egwu | Meteorology netwọkụ
Oké Osimiri Arctic Glacial
Portillo nke German | 22/09/2021 09:11 | Ciencia
El Oké Osimiri Arctic Ọ bụ nke ahụ dị na mpaghara ugwu nke ụwa anyị. Echerela m na ọ bụ oke osimiri kacha ajụ oyi ebe ọ bụ na nnukwu mmiri kpuchiri ọtụtụ mmiri ya. Site na mgbanwe ihu igwe nke a na -agbanwe. Mpempe akwụkwọ ice na -agbaze na -arịwanye elu, na -eme ụdị ndụ niile nke dabara n'ọnọdụ ọjọọ ndị a enweghị ike ịlanarị.
N'isiokwu a, anyị ga -agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara oke ikuku mmiri Arctic, njirimara ya na anụ ọhịa ya.
2 Nhazi na ihu igwe nke oke osimiri mmiri Arctic
3 Flora na anụmanụ nke oké osimiri mmiri Arctic
Isi ihe dị iche na nke a na Oke Osimiri Antarctic bụ na o nwere shelf kọntinent nke achọtara ice. Ebe ice na -aga n'ihu na -agbaze na ọnụego a, Antarctica ga -eme ka oke osimiri bilie. Oké osimiri Arctic enweghị shelf kọntinent, naanị mmiri jụrụ oyi. Nke a mere ka irighiri ihe jụrụ oyi na -ese n'elu mmiri etiti. Oké osimiri niile gbara okirikiri nnukwu mmiri a gburugburu n'oge ọkọchị na udu mmiri, ka mmiri na -ajụkwa oyi, ọ na -abawanye n'ike.
Ọ dị na mpaghara ugwu nke kacha nso na Arctic Circle. A machibidoro ya n'akụkụ mpaghara Asia, Europe na North America. Ọ na -agafe Oké Osimiri Atlantic site na Strait Fram na Oké Osimiri Barents. Ọ dịkwa oke osimiri Pacific site na Bering Strait na ụsọ mmiri niile nke Alaska, Canada, north Europe, na Russia.
Isi omimi ya dị n'etiti 2000 na 4000 mita. O nwere ngụkọta nke ihe dịka square kilomita 14.056.000.
Nhazi na ihu igwe nke oke osimiri mmiri Arctic
Ọ bụ ezie na aghọtaghị oke osimiri a nke ọma, ekwenyere na e guzobere ya ogologo oge gara aga. Ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị oke egwu na -eme ka ịmụ oke osimiri a sie ike. Eskimos ebiela ebe a ihe dị ka afọ 20.000. Ndị a amala ka esi eme mgbanwe maka oke ihu igwe nke ebe ndị a. Ha agafewo ihe ọmụma dị mkpa site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ ka ha nwee ike imegharị ndụ na ebe ndị a.
Fossils ndị a hụrụ n'oké osimiri a na -egosi ihe akaebe nke ndụ ihe ọkụkụ na -ajụ oyi. A na -eme atụmatụ na ihe dị ka nde afọ 70 gara aga, ọnọdụ ya na nke Mediterenian taa bụ otu. Ọ bụ n'oge oge ihe ọmụmụ na oge ụfọdụ ka achọpụtara oke osimiri a na -enweghị akpụrụ mmiri ọ bụla.
Ọnọdụ okpomọkụ nke oke osimiri a n'oge oyi na -agbada ruo -50 ogo, na -eme ka o sie ike ịlanarị ebe a. Ọnọdụ ihu igwe pola bụ nke kacha ajụ oyi n'ụwa, nke na -atụgharị ka ọ bụrụ nke na -adịgide adịgide na oke ikuku kwa afọ. A na -ekekarị ya na oge abụọ, oge nke ọ bụla bụ ihe dị ka ọnwa isii. Anyị ga -enyocha ọdụ ụgbọ mmiri abụọ dị na Oke Osimiri Arctic:
Ezumike: N'ọnwa oge ọkọchị, ọnọdụ okpomọkụ na -agbadata ogo 0, a na -enwe anwụ anwụ na -aga n'ihu site na anyanwụ awa 24 n'ụbọchị. Enwekwara ọkụ na -aga n'ihu na -egbochi snow nke na -agbaze kpamkpam. Site na mmalite oge ọkọchị, a ga -enwe ajọ ifufe na mmiri ozuzo ma ọ bụ snow.
Oge oyi: Okpomọkụ na -eru ogo -50, enwere abalị ebighi ebi. N'oge a n'afọ, anaghị ahụ anyanwụ n'oge ọ bụla. Ihu igwe gbachapụrụ agbachapụ na ihu igwe na -akwụsi ike. Nke a bụ maka na onweghị mmetụta sitere n'anyanwụ.
Anyị agaghị echefu na isi ihe kpatara ịdị adị nke ihe meteorological bụ mmetụta nke ìhè anyanwụ. Ya mere, n'oge oyi, ọnọdụ ihu igwe na -akwụsi ike. N'ihi mmetụta nke mgbanwe ihu igwe na okpomoku zuru ụwa ọnụ, ọnọdụ okpomọkụ nke ọnwa ọkọchị na -arị elu nke ukwuu, na -eme ka ọ fọrọ nke nta ka ọ gbazeo oke osimiri Arctic niile.
Flora na anụmanụ nke oké osimiri mmiri Arctic
Ọ bụ ezie na oke osimiri a nọ n'oké ọnọdụ, a ka nwere ọtụtụ anụmanụ na -emegharị maka gburugburu ndị a. Ọtụtụ n'ime ha nwere ajị anụ na -acha ọcha, nke nwere ike kpuchie onwe ya wee nagide oyi. E nwere ihe dị ka ụdị anụmanụ 400 na -emekọrịta ihe maka oke oyi nke mpaghara ahụ. Ndị kacha ewu ewu na nke a bụ na anyị nwere ụdị akàrà isii na ọdụm oke osimiri, ụdị whale na bea pola, nke kacha mara amara.
Enwekwara obere mollusks akpọrọ krills, nke na -arụ ọrụ dị mkpa na pyramid ebe obibi mmiri. Ahịhịa dị obere, na -enweghị ahịhịa ma ọ bụ lichens. Mpekere mmiri kpụrụ akpụ na Oké Osimiri Arctic bụ nnukwu ngọngọ. N'elu mmiri ndị na-abụghị mmiri na-amụba n'oge oyi, mmiri jụrụ oyi gbara ya gburugburu n'oge ọkọchị. Okpu ndị a na -adịkarị mita 2 ruo 3 na na -agagharị na mmiri na ikuku Siberia mgbe niile. N'ikpeazụ, anyị nwere ike ịhụ na ụfọdụ mkpụrụ osisi ice na -akụkọta onwe ha wee jikọta kpamkpam. Nke a na -emepụta ọmarịcha okpuru mmiri nke ọkpụrụkpụ ya karịrị okpukpu atọ nke okpu okpu mbụ ahụ.
Enwere ike ikwu na nnu nnu nke oke osimiri a bụ nke kacha ala na mbara ala. Nke a bụ maka na mmịkọ dị ntakịrị ma mmiri gbazere agbaze na -emetụta oke mmịkọ.
A na -eme atụmatụ na 25% nke mmanụ, gas nkịtị, tin, manganese, ọla edo, nickel, lead na platinum nọ n'oké osimiri a.. Nke a pụtara ịcha mmiri nwere ike iji akụrụngwa ndị a dịka ike na mpaghara ụzọ dị mkpa maka ọdịnihu. Oké osimiri a bụ oke nchekwa eke mmiri kacha ukwuu n'ụwa. Nchacha ya na -ebute ọnwụ ya nso.
Mbadamba ice nke Arctic na -arụ ọrụ dị ka friji zuru ụwa ọnụ, na -egosipụta okpomọkụ nke anyanwụ laghachiri na mbara igwe ma mee ka ụwa dị jụụ. Agbanyeghị na ihe na -eme na Arctic ga -emetụta ụwa niile, oghere a bụ otu n'ime nchekwa kachasị na enweghị ike ịnweta ọtụtụ ihe egwu.
N'ime afọ 30 gara aga, ụzọ atọ n'ụzọ anọ nke okpụrụ mmiri ice na-ese n'elu mmiri nke Arctic apụọla. Mbibi nke ice emeela ka oke osimiri Arctic bụrụ ebe kwesịrị ekwesị maka igagharị ma kpughee ya maka nnukwu azụ na nrigbu nke mmanụ, gas na mineral. Ọnọdụ ndị a ebutela esemokwu mmasị dị iche iche, ụfọdụ ọbụna nnukwu ọgụ agha.
Na mgbakwunye na mgbanwe mpaghara nke ga-emetụta ndụ ụmụ anụmanụ na mpaghara Arctic ozugbo, a ga-enwekwa mgbanwe '' oke '' nke ga-emetụta akụkụ ụwa dị iche iche, dịka Spain, ebe mmụba nke okpomọkụ ga-emetụta ebe obibi anyị. .
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara oke ogbu mmiri Arctic na njiri mara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oké Osimiri Arctic Glacial
Gịnị bụ trough